Vaovao - Kitapo fonosana ho an'ny otrikaretina asidra hypochlorous
Voataonan'i COVID-19, misy ny fitomboan'ny fangatahana vokatra azo avy amin'ny bakteria toy ny otrikaretina sy alikaola.
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, omilina ur dia miasa 24 ora isaky andro ho an'ny tsenan'i Hfamonoana asidra ypochlorous sy toaka.
Mandefa kitapo maherin'ny 100000 miaraka amin'ny paompy (isam-bolana) izahay) mankany amin'ny tsenan'i Japon hatramin'ny taona 2020. Ny fahaiza-manao malaza indrindra dia 5 litatra ary 20 litatra ho an'ny ranon'ny Hfamonoana asidra ypochlorous sy toaka. Matetika izahay dia mandefa any KIX amin'ny alàlan'ny rivotra, na mandefa amin'ny ranomasina mankany amin'ny seranan'i Osaka, seranan-tsambo NAGOYA ary Port TOKYO.
Ankoatry ny kitaponay ao anaty boaty (cheetaher et ldpe cubitainer), dia tianay ny mampiditra ny vokatra fonosana rehetra ao aminay:
1. SJA Series —- Kitapo Cubitainer ao anaty boaty, fitaovana plastika malefaka Ldpe, mivalona, ​​tsy misy tahony. Haben'ny fenitra 1L-25L.
2. Andian-tsarimihetsika SJB —- Kaontenera misy rano azo zahana, fitaovana Ldpe, maimaimpoana amin'ny BPA, fampiasana ivelany matetika, miaraka amina famitana. Ny habe 5L, 10L ary 20L mahazatra.
3. Andian-tsarimihetsika SJC — Sitray afaka milentika, Ldpe fitaovana, plastika malefaka, maharitra, maharitra, fampiasana any ivelany, miaraka amina mitana. Izahay no mpamatsy UNHCR lehibe indrindra amin'ity karazana vokatra ity. Ny habe mahazatra 10L sy 20L.
4. Kitapo mitsangana Cheetaher ao anaty boaty, vita amin'ny PA + PE muti-sosona, mora kokoa noho ny ldpe cubitainer, taratasy fanamarinana EU, maivana, mitahiry toerana fitehirizana, mampihena ny saram-pandefasana, endrika vaovao miaraka amina lavaka ao anaty kitapo, boaty miendrika boaty dia mifanaraka amin'ny boaty , mateza ampy, manana fitaovana / kojakoja samihafa. Ny refy 5L, 10L, 18L, 20L.
Izahay dia orinasa manana traikefa fanamboarana 10 taona. Izahay dia mivarotra an'ity karazana kitapo ity any Alibaba mandritra ny 9 taona. Customer 'ny filàna sy ny tolo-kevitra dia ny herintsika, fahafaham-po ny mpanjifa dia antsika nanenjika. Izahay dia ankehitriny mijery mandroso amin'ny fiaraha-miasa lehibe kokoa amin'ireo mpanjifany any ivelany mifototra amin'ny tombotsoan'ny tsirairay.
Mino tanteraka izahay fa ny olona amin'izao tontolo izao dia handresy ny COVID-19 atsy ho atsy.